Daniel Sturridge oo difaacay saaxiibkiis Sterling kadib eedeyntii uu la kulmay (Muxuu yiri) – Gool FM
Liibaan Fantastic June 26, 2016
(Paris) 26 Juunyo 2016 Weerar yahanka xulka qaranka ingiriiska ee Daniel Sturridge ayaa difaacay saaxiibkiis Raheem Sterling kaas oo eedeyn la kulmay kulamadii uu ciyaaray euro 2016.
Laacib kaan ayaa orin kala kulmay taageerayaasha xulka qaranka ingiriiska kuwaas oo dalbaday in dib loogu celiyo dalka kadib markii uu soo muujiyay qaab ciyaareed liita kulamadii Russia iyo Wales ee wareega guruubyada.
Sturridge ayaa sheegay in ay yaryihiin ciyaartoyda da’da yar ugu ciyaaray xulka qaranka iyo kooxda koowaad silamid ah sida uu sameeyay Raheem Sterling.
“Suurogal kuuma ahan inaad xusuusato laacib 21 jir ah oo u ciyaara xulka qaranka iyo kooxda koowaad silamid ah sida uu sameeyay Raheem” ayuu yiri Daniel Sturridge.
“Waa inaan ilaalinaa ilaa uu kamid noqonayo ciyaartoyda ugu fiican aduunka, waxaan aaminsanahay inuu gaari karo heerkaas isla markaana maalin uun aan dhihi doono waa mid kamid ah ciyaartoyda ugu fiican aduunka”.
“Waa inuu naftiisa si wayn ugu kalsoonaadaa, waa mid kamid ah ciyaartoyda ugu xirfada badan aduunka ee ma ahan kaliya ingiriiska”.
Ciyaaryahan Spain ka tirsan oo DAAHA KA ROGAY xiddigo ka mida Italy oo u goodiyey kahor is aragooda beri!